Ejipta: Ny mahery fonay, Wael Ghonim · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Ny mahery fonay, Wael Ghonim
Voadika ny 08 Febroary 2011 7:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Shqip, 繁體中文, 简体中文, 한국어, македонски, English
Nandritra ny andro maro ny Ejiptiana, nikaroka teny rehetra teny an'i Wael Ghonim, mpitantana ny Google izay tsy hita nanomboka tamin'ny 27 Janoary. Androany, taorian'ny sahoan-dresaka maro, navotsotra i Ghonim.
Google tenany mihitsy no anisan'ny voalohany nandefa fampandrenesana tao amin'ny Twitter:
Afaka ny mavesatra– nafahana i Wael Ghonim. Ny fitiavanay ho azy sy ny fianakaviany.
Ora vitsy nanaraka ny famotsorana azy, efa nanao valan-dresaka roa sahady i Ghonim. Ny voalohany, nalefan'i @HabibH tamin'ny tweet , etsy ambany, miaraka amina dikanteny avy amin'ny/sy azo tsidihana ao amin'ny Alive in Egypt:
Ny faharoa, ho an'ny DreamTV, dia nalefa nivantana ary nalefan'ilay mpanao gazety Sultan Al Qassemi tweet mivantana, izay nalaky voadika tamin'ny teny Anglisy. Ireto manaraka ireto dia fanambaràn'i Ghonim nopaingorina avy amin'ny tweets:
Wael @Ghonim: Mila antsipirihany ry zareo, vaovao. ” Vahiny ve ireo olona nanomana azy ity?” Tsy nanao hadisoana izahay, antso ilay izy
Wael @Ghonim: Ny fahitalavi-panjakana Ejiptiana dia tsy nitatitra ny marina, izany no mahatonga ny olona hanaraka ny fahitalavitra tsy miankina ankehitriny
Namarana ny fandefasany tweets tamin'ity fanambaràna ity i Al Qassemi:
ny tenin'i Wael @Ghonim farany: Te-hiteny amin'ireo fianakaviana namoy zanakalahy aho hoe tsy hadisoantsika izao. Hadisoan'ireo mifikitra amin'ny fahefana.
Azo jerena ao amin'ny YouTube koa (amin'ny teny Arabo) ilay valan-dresaka no sady voadika ato.
Ejiptiana sy hafa maro be tao amin'ny Twitter no voasarika tamin'ny valan-dresaka nataon'i Ghonim, ka niantsoan'ny maro azy ho mahery fo. @EgyptSecularist manoratra hoe:
Kihon-dàlana iray amin'ny revolisiona iny. Ny fihetseham-pon'i @Ghonim dia hanome hery bebe kokoa ny ao #tahrir. Ho andro mitalakotrokotroka ny rahampitso.
@SarraMoneir ihany koa dia naneho ny fankasitrahany:
mitomany i Ejipta… safotry ny ranomasoko aho. ANDRIAMANITRA ANIE HITAHY ANAO RY @Ghonim
@CaireneGirl Sherine Elbanhawy koa mankalaza an'i Ghonim:
@Ghonim Mirehareha izahay manana anao. Tsy misy manome tsiny anao. Tena tia tanindrazana marina ianao. Tianay ianao. Atrakao avo ny lohanao. Nanafaka an'i #Egypt ianao #jan25
Ilay mpanao gazety mipetraka any Kairo, Ben Wedeman (@bencnn) dia manaiky:
ny valan-dresak'i wael @ghonim tao amin'ny DreamTV: Horohorontany. #Jan25 #Egypt #tahrir
Ilay Ejiptiana mpanao gazety, @SarahCarr dia manana fomba fijery toy izay ihany koa:
Amin'ny manaraka raha mbola misy misalasala ny amin'ny anton'ny fibodoana ao Tahrir dia asaivo mijery ny valan-dresaka nataon'i @ghonim izy #jan25